3D Scanner, Nidaamka ODM, Kaarka Xakamaynta - FEELTEK
3D Scanner-Cagaaran Cagaaran
Hel muunado bilaash ah iyo buugaag sawir lehTag
FEELTEK waxay diiradda saareysay nidaamka diiradda firfircoon ee 3D sanado badan. Waxaan had iyo jeer xoojinaynaa qayb ahaanta xakamaynta softiweerka, naqshadeynta muraayadaha inta lagu jiro maaddada iyo ka shaqeynta ku guuleysiga arjiga.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafey, FEELTEK waxaa ka go'an istiraatiijiyadda "Hoggaaminta hal-abuurnimada 3D ee hal abuurka leh" waxayna soo bandhigtay taxaneyaal 3D scanhead ah oo taageeraya dhererka dhererka 10640/1064/980/532 / 355nm oo leh fursadaha cabbirka furitaanka 10/15/20/30 / 40/70 suuqa.
Sida lammaane muhiim u ah isuduwaha ka shaqaynta leysarka, FEELTEK wuxuu had iyo jeer muhiimad gaar ah u leeyahay xallinta xalka
Naqshad Sax ah
Muraayad casri ah oo casri ah, tamar xoog leh iyo lebis isku mid ah. Dherer dherer badan iyo xulashooyinka goobta shaqada
Sax Sare Xawaare Sare Heerkulka Hoosudhaca. Xawaare sare, heerkulka hooseeya socodka galvanometer. Tiknoolajiyada xakamaynta wadista gaarka ah
Is-Soo-Saarista Barnaamijka Codsiga. Waxay bixisaa xalal kaladuwan oo xalal ah oo ku saleysan teknolojiyad diiradda firfircoon: calaamadeynta muuqaalka muuqaalka, calaamadeynta qadka wareega ee ballaaran, Calaamadeynta dusha 3D, xardhida gargaarka, alxanka 3D, walxaha wax lagu daro iyo kuwa kala goynta ah, iwm.
Nidaamka xakamaynta is-horumarsan ee khayraadka is-dhexgalka badan. Interface Robot, CCD, Moving Line, waxay qancinayaan codsiga nidaamka edbinta.
FEELTEK wuxuu kuu noqon doonaa lamaanahaaga muhiimka ah ee 2D illaa 3D nidaamka qaabeynta galvo
Bixiyaan saxnaan sare, xawaare sare, xasiloonida sare ee xoojinta nidaamka, nashqadeynta wadada indhaha
FEELTEK waxay uruurisay tiro aad u tiro badan oo ah nidaamka 2D iyo 2.5 D scanheads khibradaha habayntooda sidoo kale.
Lammaane muhiim ah oo qalabka galvanometer laser processing, muhiimad weyn ku dhejinaya xal habka kartoo
hawk (naxaas) xardho
caaryada wanaagsan / xun
Koobka (aluminium) Calaamadaha Sawirka
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansameysa mabda'a tayada marka hore. Alaabtayadu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..
Maxaa dhacaya haddii aysan ahayn kaliya 2D ...
Marka lagu daro FEELTEK 2D scanhead, tixgelinta ku habboonaanta iyo dabacsanaanta, waxaan sidoo kale bixinnaa dhowr ikhtiyaar oo module ah oo loogu talagalay macmiilka ujeedkiisu yahay inuu sameeyo ...
FEELTEK Label calaamadeynta m ...
Waxaa jira codsi sii kordhaya oo ku saabsan calaamadeynta calaamadaha qaybaha farsamada, gaar ahaan warshadaha gawaarida, sida xarunta, batteriga mashiinka, miiraha hawada iwm.
Ciid Wanaagsan iyo N ...
Maaddaama 2021 ay dhowaan soo socoto Dhammaanteen aan wada daryeesho oo aan taageerno baahida qof walba u qabo caafimaad wanaagsan, qado wanaagsan iyo barwaaqo. FEELTEK wis ...
FEELTEK waxay bixisaa 2D, 2.5D, 3D scanhead, DFM (Module Focus Module), Module XY OEM iyo waliba habeyn software.
Iyada oo guud ahaan alaab-qeybiyeha nidaamka wax lagu baaro, waxaan aaminsanahay in FEELTEK uu noqon doono lammaanahaaga la-beddeli karo ee 2D illaa 3D scanhead.
FEELTEK Shirkadda Teknoolajiyadda Laser
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010 - 2021: FEELTEK Laser Technology Co., Ltd. Dhammaan xuquuq dhowran.